Maalinta: Abriil 9, 2020
Khadka Manisa-Bandırma Km: 138 + 786, Km: 170 + 120, Km: 202 + 400 iyo Km: 221 + 230. / 4 KIK waa lasiiyay [More ...]
Wasaaradda Arimaha Gudaha ayaa u dirtay wareeg dheeri ah 81 Maamulayaal Degmooyin iyadoo laga reebayo arrimaha la xiriira carruurta iyo dhalinyarada leh Baahiyaha Gaarka ah ee hoos imanaya tallaabooyinka coronavirus. Sida ku xusan wareegtada, kayar da'da 20, in lagu sii jiro jawi xiran waqti dheer [More ...]
Dawlada Hoose ee Tuzla waxay sii wadaysaa dadaalkeeda nadiifinta iyo kahortaga jeermiska ee gaadiidka dadweynaha iyo joogsiyada. Marka la eego baaxadda dadaallada lagula dagaallamayo dillaaca coronavirus, dhammaan aagagga dadweynaha iyo baraha caamka loo isticmaalo ee Tuzla [More ...]
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) oo bilaabay on 15.04.2020/01.05.2020/XNUMX, XNUMX/XNUMX/XNUMX Taariikhda taas oo dhici doonaa Waxbarashada xirfadaha iyo Summer (High School-Degree-School) codsiga internship waxaa dib loo dhigay in taariikh dambe .. Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State [More ...]
Saldhigga Eskisehir YHT
Saldhigga Eskişehir YHT waa saldhigga tareenka ugu weyn ee TCDD oo ku yaal Eskişehir. Xarunta waxaa adeegsada TCDD Tasimacilik tareeno xawaare sare leh. Saldhigga Eskişehir YHT wuxuu u dhexeeyaa masaafo lug ah oo bartamaha magaalada ah iyo xarumaha madadaalada, badiyaa Istanbul, [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Erzurum waxay sameysay isudiyaarin taxane ah oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha inta ay la egtahay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka COVID-19. Magaala-weyn, 20.00 - 20.30 iyo 21.00 markii ugu dambeysay ee laymanka adeegyada gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Kooxaha Boliiska Dowlada Hoose ee Magaalada Sakarya waxay adkeeyeen kormeerkooda talaabooyinka laga qaadayo gaadiidka dadweynaha. Kooxaha Boliiska Magaalada Caasumada ah waxay sii wadayaan kontarooladooda tilaabooyinka lagu qaado gaadiidka dadweynaha marka loo eego la dagaallanka coronavirus. Rakaabka Wasaaradda Arimaha Gudaha [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada Gobolka ayaa ku dhawaaqay tirakoobka garoonka diyaaradaha inta lagu gudajiro bisha Maarso 2020. Warshadaha duulimaadyada, oo ay waqti adag ku jirtay cudurka dilaaga ah ee cudurka corona ee saameeyay adduunka, ayaa ahaa [More ...]
Tallaabooyinka Coronavirus iyo xiritaanka iskuulada ayaa horseeday isbadal weyn oo ku yimaada gaadiidka magaalada Istanbul. Waqtiga ugu sarreeya ee taraafikada Istanbul ayaa isbedelay; Subaxnimadii waxay ka gudubtay 08.00-09.00 ilaa 17.00-18.00. In kasta oo kala-guurka labada dhinac hoos u dhacay boqolkiiba 52,8, ayaa ugu badan [More ...]
SAMULAŞ, oo loo aasaasay 2010 iyada oo ah qayb ka mid ah Dawladda Hoose ee Magaalada Samsun waxayna daboolaysaa nidaamka gaadiidka dadweynaha ee magaalada iyo noocyada saadka ee la xiriira, inta lagu jiro xilliyada bixitaanka taraamka, xoogaa muujinta iyo khadadka tareenka. [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Tunç Soyer, Karşıyaka- Dariiqad muhiim ah ayaa laga waayey mashruuca taraamka ee loo qorsheeyay in lagu adeego inta u dhaxeysa Çigli. Madaxweyne Soyer ayaa bayaan uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku soo qoray Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. [More ...]
Iyadoo la muwaadiniinta coronavirus ka dillaacay Turkey dagaal, in kala iibsiga dhista shaqeeyaan-ka dhisay biriijyo iyo model lacagaha damaanad si loo sameeyo jidadka waawayn, inkastoo barakac ku jirin in la soo baratay ay ka maqan yihiin mucaaradka iyo baahida guud ee damaanado [More ...]
Taariikhda qandaraaska ee Wadada Aydın-Denizli ayaa dib loo dhigay ilaa 11ka Juun. Qandaraaska ku meel gaarka ah oo ah 25 milyan oo lira ah ayaa dib loo dhigay hal bil. Waxaa lagu daabacay Gazette Rasmiga ah ee Agaasinka Guud ee Wadooyinka, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş wuxuu taageero siiyaa dadka u baahan dhammaan xirfadaha iyo kooxaha da'da ee ku nool Caasimadda. Sii wadida cunnada iyo kaalmada lacageed ee ganacsatada oo shaqooyinkoodii ku waayey muwaadiniintii shaqooyinkoodii waayay [More ...]
Sababo la xiriira cudurka 'coronavirus', howlihii dhaqanka iyo fanka ayaa si ku meel gaar ah loogu joojiyay Ankara. Waaxda Dhaqanka Dowlada Hoose iyo Arimaha Bulshada Adeeg cusub oo loogu talo galay dadka jecel farshaxanka oo guryahooda ku leh wicitaanka "HomeKal" [More ...]
Ceyrinta waxaa la mamnuucay 3 bilood ..! Oggolaansha Bilaashka ah 39.24 TL Bixi Maalintii
AKP waxay baarlamaanka u keentaa boorso cusub oo sharci ah iyada oo ay ku jirto baaxadda cabirka corona. Sida ku xusan sharciga qabyada ah ee ay gaartay SÖZCÜ, shaqo ka joojinta ayaa laga mamnuuci doonaa 3 bilood. Loo-shaqeeyayaashu waxay awoodi doonaan inay uga baxaan shaqaalaha fasax bilaash ah iyo [More ...]
Sarkaalka Gaadiidka-Sen, warqad u qoraya DHMI, TCDD iyo TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]
19 kun oo deeq waxbarasho oo TL ah oo loogu talagalay Shaqo barayaasha si looga shaqeeyo Kovid-6 Mashaariicda R&D la xiriira
Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda ayaa raadineysa cilmi-baarayaal la dagaallamaya nooca cusub ee loo yaqaan 'coronavirus Covid-19', oo dunida ruxay. TÜBİTAK wuxuu bilaabay barnaamijka deeqda waxbarasho ee tababartayaasha (STAR). Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa ku baaqay barnaamijka [More ...]
Qorshe-hawleed cusub oo loogu talagalay Engelsizmir maalmaha Corona
Guddigii Engelsizmir waxay isu yimaadeen oo dejiyeen khariidad cusub oo waddo ah oo ku saabsan baaxadda degmada Dhibaatada. Waxaa aasaasay Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo u dejisay inay noqoto hormuudka nolosha naafada ah, si xal loogu helo dhibaatooyinka naafada. [More ...]
RayHaber 09.04.2020 Warbixinta Shirka
Hawlaha laydhka waxaa lagu qaban doonaa baaxaddeeda darawalnimda Metrobus iyo gaadiidka dadweynaha ee Magaalooyinka Baska Shahaadada Saxeexista Mashruuca Shirkadda Ankaray Shirkad Raadinta Bixinta [More ...]
Tirada Goobaha leh Corona Quarantine lagu dhawaaqay
Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay soo saartay bayaan cusub oo ku saabsan talaabooyinka fayraska corona. Bayaanka Wasaaradda waa sidan soo socota: Marka la eego cabirrada fayraska corona; Laga bilaabo 08.04.2020, saacaddu markay ahayd 16.00, 45 degmo; 2 xarumo degmo, 6 [More ...]
Xarunta Hakkari Merga Butan Ski Center waxaa lagu dhisi doonaa huteel 130-sariirood leh; Guddoomiyaha Hakkari İdris Akbıyık, hoteel 130-sariirood ah ayaa la qorsheeyay in laga dhiso Merga Butan Ski Center gudaha mashruuca "Furitaanka Caalamka ee Dalxiiska Hakkari Ski" [More ...]
Cusbitaalka Magaalada İzmir ee Cusbitaalka Eşrefpaşa Hospital wuxuu soo saaray qaab kale oo lagu yareeyo suurtagalnimada gudbinta inta la baarayo bukaannada isbitaalka yimaada iyada oo looga shakisan yahay Covid-19. Maamulka cisbitaalka wuxuu leeyahay golaha badbaadada qolka badbaadada si looga qaado bukaanka. [More ...]
Maanta oo ku taal Taariikhda 9 Abril 1921 Golaha Qaranka ee Turkiga (TBMM) wuxuu kordhiyay qiimaha safarka tareennada Anatolian-Baghdad ee 6. Khidmadaha safarka ee khadadka, iyadoo loo eegayo meesha xariiqda, iyadoo loo eegayo canshuuraha laga diyaariyey 1888, 1892 iyo 1902 [More ...]
Maanta taariikhda: 24 May 1924 oo ay maamusho shirkado shisheeye
Liiska Shirkadaha laga iibiyey Ajaanibta 10-kii sano ee la soo dhaafay
Safarrada YHT waxay ka bilaabmayaan tilaabooyinka la qaadey May 28! Tigidhada waxaa lagu iibsan doonaa Codsiga HEPP
Waa kuma Cali İhsan Uygun?
Adeegyada Gaadiidka Xafiiska
13. Geli Dakhliga Dakhliga Dalxiiska Adduunka ee Turkiga
Xperia Hotels waxay u yimaadeen marxaladda ugu dambeysa inay maalgashadaan Erciyes. Duqa Magaalada Dr. Memduh Büyükkılıç wuxuu ku dhawaaqay in hoteelka, oo soo gaadhay marxaladda ugu hooseysa, uu yeelan doono 550 sariirood. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa sii wadata howlgalka 7/24 ee ah bandowga lagu soo rogay bandowga taas oo qayb ka ah la dagaallanka faafitaanka cudurka coronavirus. 16 kun 19 tan oo dhir ah inta u dhaxaysa 23-302 Meey [More ...]
Sidee loo sameeyaa Duulimaadyada IETT inta lagu gudajiro Maalmaha Ciidda?
Nidaamka Qeybinta Lixaad ee Submarine Information Distribine (DBDS) oo ay soo saartey HAVELSAN inta ay gaarsiisan tahay Mashruuca Nooca Nooca Submarine-ka Cusub (YTDP) ayaa ka soo baxay khadka wax soo saarka waxayna galeen khadka imtixaanka. Iyada oo ay la socoto shirkadda Jarmalka ee TKMS [More ...]
Shabakada ASELSAN ee Mashruuca Xirfadda leh ee Taakulaynta loo adeegsaday Jimicsiga NATO